Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Doorashada Beddelka Ciyaarta ee UNWTO: Sidee bay hadda u shaqayn doontaa?
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Costa Rica • Wararka Dowladda • Shirarka • News • Wararka Spain • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Maalin cusub oo Dalxiiska Adduunka ah! Maalin cusub oo UNWTO ah! Maalin cusub oo loogu talagalay Dalxiiska Costa Rica! Dalxiiska adduunka ayaa ku jira isbedel cusub iyadoo Costa Rica ay hogaamineyso hanaanka doorashada soo socota ee Golaha Guud ee UNWTO ee Madrid.
Maanta Mudane. Gustav Segura Costa Sancho, wasiirka dalxiiska ee Costa Rica wuxuu qoorta u geliyay codsi sir ah oo codbixin sir ah oo loogu talagalay dib-u-xaqiijinta Xoghayaha Guud ee UNWTO ee Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda Diseembar 3, 2021
Codsigani waxa uu meesha ka saarayaa xaqiijinta SG si xamaasad leh. Talaabadan ayaa ah tii ugu horeysay ee taariikhda UNWTO, iyo wax ka bedel ciyaarta ciyaarta.
Maxaa dhacaya haddii Xoghayaha Guud ee hadda Zurab Pololikashvili uusan heli doonin codadka 2/3 ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo muddo kale? Habka saxda ah ayaa lagu qeexay qodobkan - waana sahlan tahay!
Talaabada lama filaanka ah ee maanta ayaa Mudane. Gustav Segura Costa Sancho, wasiirka dalxiiska ee Costa Rica ayaa isaga iyo dalkiisa u raray kursiga darawalnimada ee Dalxiiska Adduunka.
Isaga oo ku hadlaya magaca dawladdiisa, waxa uu si rasmi ah u dalbaday cod-bixin qarsoodi ah oo lagu taageerayo talada Golaha Fulinta ee lagu xaqiijinayo in Xoghayaha Guud ee UNWTO uu muddo kordhin u sameeyo. Codbixintan ayaa dhici doonta Diisambar 3, 2021 shirka guud ee UNWTO ee soo socda ee Madrid.
Wasiiro badan ayaa rajo ka qabay in tallaabadan ay dhacdo, balse ma jirin qof ku dhiiraday in uu qoortiisa iska soo saaro ama xitaa la sheego.
Isagoo muujinaya hoggaan dhab ah iyo u heellanaanta dalxiiska adduunka, Hon. Gustav Segura Costa Sancho maanta waxa uu sameeyay waxa ay dad badani rajaynayeen in ay dhacaan, laakiin qofna ma doonayn in uu bilaabo.
Iyadoo la tixgelinayo dhibaatada socota ee COVID-19 waxay caqabad ku tahay dalal badan inay u soo diraan wasiirkooda dalxiiska ama wafdigooda Madrid, tallaabadan geesinimada leh ee Costa Rica waxay rajeyneysaa inay dhiirigeliso kuwa kale inay ku daydaan.
Ka qaybgalka wanaagsan looma baahna kaliya kooram la’aan, laakiin si loo xaqiijiyo doorasho xalaal ah oo dhamaystiran oo ay qabtaan xubnaha UNWTO. Dalxiisku marka la tixgeliyo in uu yahay mid lagu maareynayo dhibaatada ugu adag, hoggaan wanaagsan oo adag ayaa ka faa'iideysan doona waddan kasta, dhaqaalihiisa, shaqadiisa iyo siyaasaddiisa.
Waa in la ogaadaa, in Costa Rica ay weydiinayso, in magacaabista Xoghayaha Guud Muddada 2022-2025 waa in lagu sameeyaa cod qarsoodi ah dhammaan xubnaha xaadirka ah iyo kuwa waxtarka leh sida lagu sheegay xeerar. Codsigan ayaa dhaqan gelin doona xeerkaas xidhiidhka ka dhexeeya Dawladaha/UNWTO, Costa Rica waxay ku sheegtay warqadda uu u diray Xoghaynta UNWTO November 15.
DIGNIIN: Codaynta sirta ah macnaheedu maaha "Baloot Electronic ah."
eTurboNews Waxa digniintan maanta ka helay xubin goobaabin ah iyo UNWTO oo xog-ogaal u ah. Wuxuu u sheegay eTN..
Khatarta u dhaxaysa warqad-codbixinta dhaqanka iyo cod-bixinta elektarooniga ah!
Doodda ugu weyn ee Xoghayaha-guud ayaa ah in loo fududeeyo xubnaha inay ka codeeyaan Golaha Guud iyadoo la adeegsanayo habka codeynta ee elegtarooniga ah.
Waxa xiiso leh, in Xoghayaha Guud ee hadda jira uu isla soo jeedintaas soo jeedinayo Ajendaha shayga 16. Shaygani waxa uu soo jeedinayaa in wax laga beddelo xeer-hoosaadka Golaha Guud (A/24/16).
Sababaha uu Xoghayaha Guud ee hadda jira u doorbidi karo habkan waa wax iska cad:
Warqadaha cod-bixinta iyo tibaaxayaasha laguma dhaq-dhaqaaqi karo maadaama hab-socodku yahay mid la xisaabin karo min A ilaa Z.
Codka elektarooniga ah lama xisaabin karo.
Codka elegtarooniga ah waxa si fudud u maamuli kara Xoghaynta, maadaama ay gacanta ku hayaan qalabka habka codaynta elektaroonigga ah. Codeyntan ayaa sidoo kale laga yaabaa inaysan hubin sirta codbixinta. Waxaa laga yaabaa inay cadaadis saarto wadamada laga yaabo inay siiyeen dammaanad afka ah, laakiin rabay inay qaadaan waddo kale.
Maxaa dhacaya haddii Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili aan la xaqiijin December 3?
Haddii Golaha Guud uu qaadan waayo talada uu soo jeediyay Golaha Fulinta ee jagada Xoghayaha Guud ee Ururka.
GA waxa ay faraysaa golaha fulinta kalfadhiga 115 ee lagu qabanayo Madrid, Spain, Diseembar 3, 2021, u furaya hannaan cusub oo doorashada Xoghayaha Guud ee Ururka.
Waxa uu farayaa Golaha Fulinta in habka doorashada uu yahay ugu yaraan saddex bilood iyo ugu badnaan lix bilood, laga bilaabo taariikhda furitaanka hannaanka doorashada.
Wuxuu farayaa Guddoomiyaha Golaha Fulinta iyo Xoghayaha Guud ee Ururka inay isugu yimaadaan Golaha Fulinta ee 116aad iyo Shirweyne Guud oo aan caadi ahayn, May 2022, oo lagu qabto meel iyo taariikhda la cayimay.
Magacyada sida Xoghayaha Guud ee Ku-meel-gaarka ah ee Ad, Mr. Zhu Shanzhong, Agaasimaha Fulinta, kaas oo la wareegi doona hawlahan oo kale isagoo la kaashanaya Madaxweynaha Golaha Fulinta, laga bilaabo Janaayo 1, 2022.
Habka iyo jadwalka doorashada Xoghayaha Guud ee Ururka ee muddada 2022-2025
December 3, 2021: Ansixinta habraaca doorashada iyo jadwalka kalfadhiga 115aad ee golaha fulinta ee Madrid, Spain.
December 2021: Ogeysiis boos bannaan waa in lagu dhejiyaa mareegaha UNWTO iyo qoraal afka ah in loo diro dhammaan xubnaha taasoo muujineysa waqtiga kama dambaysta ah ee helitaanka codsiyada.
11 March 2022 (taariikhda la xaqiijinayo): Xilliga kama dambaysta ah ee helitaanka codsiyada, ie, laba bilood ka hor furitaanka kalfadhiga 116aad ee Golaha Fulinta ee Madrid, Spain, 11ka Meey 2022 (taariikhda la xaqiijinayo).
Marka ay si rasmi ah u furmaan musharixiinta, waxaa lagu wargelinayaa musharixiinta in ay sax tahay musharaxnimadooda.
11 April 2022 (taariikhda la xaqiijinayo): Ogow hadal afka ah oo la soo saarayo oo lagu shaacinayo musharaxiinta la helay (xilliga kama dambaysta ah ee faafinta murashaxiintu waa 30 maalmood ka hor furitaanka kalfadhiga 116aad ee Golaha Fulinta).
11-12 May 2022 (taariikhda la xaqiijinayo): Doorashada xubnaha golaha fulinta ee kalfadhiga 116aad ee lagu qabanayo magaalada Madrid, Spain, ee xarunta dhexe ee Ururka.
13 May 2022Doorashada Xoghayaha Guud ee Muddada 2022-2025 ee kalfadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha loo dhan yahay ee lagu qabanayo Madrid, Spain.
Xeerarka, Hababka iyo Farta-yar:
Tisaga Golaha Guud:
Hannaanka Doorashada Xoghayaha Guud ee UNWTO:
Doorashada Xoghayaha Guud ee UNWTO waxay leedahay laba weji:
Hannaan doorasho oo ka mid ah guddiga fulinta, marka uu qaabilo musharixiinta, Golaha Fulintu waxa uu u codeeyaa in uu kula taliyo Golaha Guud musharax.
Musharaxa lagu taliyay waxaa ansixiyay (ama maya) Golaha Guud.
Qodobka 22aad ee Xeerarka UNWTO ayaa si cad u qeexaya in doorashada Xoghayaha Guud ay tahay in la qabto saddex meelood labo meel xubnaha hadda jira iyo kuwa wax ku ool ah:
Isla markaana, qodobka 38-aad farqadiisa 2-aad, dash e) ee xeer-hoosaadka Golaha Guud, waxa uu dhigayaa in doorashada Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ay ku qabsoonto aqlabiyad saddex-meelood laba meel xubnaha hadda jooga iyo kuwa waxtarka leh.
Ka dib, qodobka 43 ee xeer hoosaadka golaha guud wuxuu si cad u qeexayaa in doorashadu ay tahay mid loo dhan yahay warqad qarsoodi ah.
Waxa caado u ahayd in si sawaxan ah lagu soo doorto Xoghayaha Guud, balse taasi maaha mid ku dhisan xeerar hadda jira ee waa dhaqan.
Haddii hal waddan oo xubin ka ah uu weydiiyo in doorashadu ku dhacdo cod qarsoodi ah, taas ayaa ku filan in laga tago caadadii ammaanta iyo in la sii wado codka qarsoodiga ah ee dhammaan xubnaha xaadirka ah iyo kuwa waxtarka leh.
Si loo doorto ama dib loo doorto, musharraxa ay soo jeediyaan Golaha Fulinta, waa in uu gaaro 2/3 dhammaan xubnaha cod-bixinta ee hadda jira oo waxtar leh.
Haddii ay dhacdo in dib loo doorto Xoghayaha Guud, Golaha loo dhan yahay waa in uu qaataa heshiis ku jira ajendaha 9 ee Doorashada Xoghayaha Guud, halkaas oo uu farayo Golaha Fulinta in uu furo hab cusub oo loogu talagalay magacaabista Xoghayaha Guud ee UNWTO.
Qodobka 22aad ee Xeerarka UNWTO wuxuu u dhignaa sidan:
“Xoghayaha Guud waxa lagu magacaabayaa saddex-meelood laba meelood xubnaha buuxa ee jooga iyo codaynta Golaha, soo jeedinta Goluhu, muddo afar sano ah. Magacaabistiisu waa mid dib loo cusboonaysiin doono.”
Muddada xilka Xoghayaha Guud ee hadda jirta waxa ay ku egtahay 31 December 2021. Sidaa darteed waxaa Golaha Guud ku waajib ah in uu u magacaabo Xoghaye Guud muddada 2022-2025 kalfadhi aan caadi ahayn oo la qabanayo iyo taariikhda la qabanayo. la go'aamiyay 2022.
Haddaba, iyadoo la raacayo qodobka 22-aad ee xeer-hoosaadka iyo xeer-hoosaadka 29-aad ee xeer-hoosaadka golaha fulinta, golaha fulinta waxa looga baahan yahay kal-fadhiga 116-aad (11-12 May 2022).taariikhaha la xaqiijinayo)) inuu u taliyo qof loo soo magacaabayo Golaha Guud. Dukumeentigu wuxuu bixinayaa nidaamka iyo jadwalka doorashadaas.
Ujeedooyinka magacaabistan, waxaa la soo jeediyay in la raaco dhaqanka la dejiyay, gaar ahaan, taas Xeerarka uu Goluhu ansixiyay doorashada qof la magacaabayo xilka Xoghayaha Guud Kalfadhigiisii ​​saddex iyo labaatanaad ee May 1984 (go'aankii 17 (XXIII)), oo lagu kabay kuwii lagu ansixiyay kalfadhigiisii ​​afar iyo soddonaad ee Noofambar 1988 (go'aankii 19(XXXIV)), iyo kalfadhigiisii ​​afar iyo afartanaad ee Noofambar 1992 (go'aan 19 (XLIV) la dhawro.
Xeerarkan aan kor ku soo xusnay, oo si joogto ah loogu dabaqay magacaabista jagada Xoghayaha Guud ilaa 1992, ayaa dhigaya kuwan:
“(a) Muwaadiniinta Dawladaha Xubnaha ka ah WTO oo kaliya ayaa noqon kara musharrax;
(b) Musharixiinta waxaa si rasmi ah Golaha ugu soo jeedin doona Xoghaynta Dawladaha ay ka soo jeedaan, soo jeedintaasina waa in ay noqdaan. la helay wax aan ka dambayn (taariikhda la go'aamin doono), summada boostada oo caddaynaysa;
“(c) Codaynta waa in lagu codeeyaa si qarsoodi ah iyadoo la raacayo Mabaadi’da Haga ee Qabsoomidda Doorashooyinka ee Codbixinta qarsoodiga ah ee ku lifaaqan Xeer-hoosaadka Golaha Guud;
“(d) Codaynta waxa lagu go’aamin doonaa si waafaqsan qodobka 30-aad ee xeer-hoosaadka iyo xeerka 28-aad ee xeer-hoosaadka golaha, si aqlabiyad fudud, laguna qeexo boqolkiiba konton iyo hal cod oo ansax ah;
“(e) Xulista hal qof oo Goluhu soo magacaabayo waa in lagu qabtaa, iyadoo la raacayo xeer-hoosaadka 29aad ee xeer-hoosaadka Golaha, marka uu jiro shir gaar ah oo qayb ka mid ahi noqonayo kulan xaddidan, sidatan.
“(i) ka doodista musharixiinta waa in lagu qabtaa shir gaar ah oo xaddidan oo ay joogaan ergada wax dooranaysa iyo turjubaannada; ma jiri doono qoraal qoraal ah iyo inaan cajalad laga duubin doodaha;
“(ii) inta lagu guda jiro xoghaynta codaynta shaqaalaha lagama maarmaanka u ah inay gacan ka geystaan ​​codbixinta waa in la aqbalaa;
“(f) Golaha Fulintu waxa uu go’aan ku gaadhay in aanu u soo jeedin musharrax ay soo jeediso dawladda xubinta ka ah dayn-urur aan sabab lahayn (faqradda 12 ee Xeerarka Maalgelinta ee ku lifaaqan Xeerarka);
"(g) Goluhu waa in uu soo xulaa hal qof oo kaliya si uu ula taliyo Golaha."
Intaa waxaa dheer, nidaamka loo dejiyay helitaanka magacaabista ee la dabaqay tan iyo 1992 wuxuu bixiyaa arrimaha soo socda marka la eego soo jeedinta magacaabista:
"Mid walba magacaabista waa in ay la socotaa taariikh nololeedka manhajka iyo qoraalka ujeeddada siyaasadda iyo maamulka, taasoo muujinaysa ra'yiga qofka la magacaabayo ee ku aaddan qaabka uu u gudan doono hawlaha Xoghayaha Guud. Faahfaahintan waxa loo soo ururin doonaa qaab dukumeenti Koonsil ah waxaana lala socodsiin doonaa Xubnihiisa inta lagu jiro wakhtiga loo cayimay.
“Si loo ilaaliyo sinnaanta dadka la magacaabayo iyo in dukumeentiyadooda la akhriyo, waxaa la soo jeediyay in manhajka waxbarasho lagu soo koobo, la yiraahdo, laba bog iyo qoraallada siyaasadda iyo maamulka ee loogu talagalay lix bog. Magacaabista waxa lagu soo bandhigi doonaa hab alifbeeto ah oo ku jira dukumeentiga Golaha.
Laga soo bilaabo 1992, wakhtiga xaddidan ee loogu talagalay helitaanka musharraxiinta (kaas oo ay taageerto dawladda u dhiganta, curricula vitae iyo bayaannada ku saabsan ujeeddada waa in si dhab ah loogu lifaaqaa) ayaa la aasaasay laba bilood ka hor kalfadhiga kaas oo Golaha Fulinta looga baahan yahay inay doortaan qof la magacaabayo. Sidaas awgeed Xoghayntu waxay ku wargelinaysaa dhammaan Xubnaha qoraal qoraal ah oo ku saabsan helitaanka magacaabista.
Tan iyo 1997-kii, xubnaha loo doortay jagada Xoghayaha Guud waxay soo jeedinayeen hadal hadal ah oo ay ku muujinayaan musharaxnimadooda iyo waxa ay doonayaan inta lagu jiro kalfadhiga magacaabista golaha. Waxaa loogu yeeraa habka alifbeetada Isbaanishka ee magacyadooda, kuwa la magacaabay waxaa loo qoondeeyay waqti isku mid ah si ay u soo bandhigaan bandhigyadooda kuwaas oo aan raacin wadahadal.
Sida uu dhigayo xeer 29(3) ee xeer hoosaadka golaha fulinta, talo soo jeedinta golaha qofka loo magacaabayo jagada Xoghayaha Guud: “waxa codayn doona hal dheeri xubnaha golaha ee jooga oo u codeeya2. Haddii aanu musharrax helin aqlabiyadda codaynta koowaad, hal labaad iyo haddii loo baahdo waa in la qabtaa codbixintii dambe ee lagu kala saari lahaa labada murashax ee helay tirada ugu badan ee codadka.”
Iyadoo la raacayo hab-dhaqanka joogtada ah ee Ururka, ee lagu xasuusto go'aanka 17(XXIII) ee 1984, aqlabiyad fudud ayaa lagu qeexay "boqolkiiba 50 oo lagu daray mid ka mid ah warqadaha cod bixinta ee saxda ah". Xeerkan waxa la xaqiijiyay 1988 iyo 1992 (go'aamadii 19(XXXIV) iyo 19(XLIV)). Haddii ay dhacdo tiro aan caadi ahayn, waxay u muuqataa inay waafaqsan tahay macquulka, oo leh macnaha caadiga ah ee erayada iyo dhaqanka ugu sarreeya, si loo qeexo halkii ay ka dhigan tahay tirada codadka isla markiiba in ka badan kala bar codadka la dhiibtay.3.
Sida habraacyada "labaad" iyo "codbixinta ku xigta" ee lagu sheegay xeer 29(3), haddii ay lagama maarmaan noqoto, caddaynta uu bixiyay La-taliyaha Sharciga ee Dukumentiga Warfaafinta ee Doorashada Xoghayaha Guud ee 1989 oo la xaqiijiyay 2008 (16(LXXXIV)) ayaa codsan doona haddii ay dhacdo in laba musharax ay wadaagaan booska labaad ee codbixinta koowaad. Natiijadu waxay noqon doontaa in cod-bixin kale (iyo inta kale ee lagama maarmaanka u ah helitaanka aqlabiyadda loo baahan yahay) in la abaabulo oo u dhexeeya saddexda musharrax si ay u go'aamiyaan labada murashax ee helay tirada ugu badan ee codadka, ka dibna ka qaybgeli doona codbixinta ugu dambeysa.
Matalaadda Gobol ee xubin kale oo buuxda oo ka tirsan Ururka inta lagu guda jiro doorashada qofka la magacaabayo waxay raaci doontaa go'aamadii uu soo saaray Golaha Guud ee Kalfadhigii 19aad ee Jamhuuriyadda Kuuriya ee 2011 ( Qaraarka 591 (XIX)), kalfadhigii 20aad ee Zambia/Zimbabwe ee 2013 (xararkii 633(XX)) iyo fadhigiisii ​​21aad ee Colombia 2015 (xarkii 649(XXI)).
Waxaa la xusuustaa in xubnaha lagu dhaqmaayo qodobka 34-aad ee xeer-hoosaadka iyo farqadiisa 13-aad ee xeer-hoosaadka maaliyadda ee ku lifaaqan xilliga doorashada, laga xayuubiyay xuquuqdii xubinnimada ee adeegga iyo xaqa cod-bixinta Golaha. iyo Golaha haddii aan la siin ka-dhaafitaan ku-meel-gaar ah ku-meel-gaadhka ah ee ku-dhaqanka qodobbadaas Golaha.
Habka lagu sheegay dukumeentigan ayaa si guul leh loo dhaqan geliyay, iyadoo aan dhibaato gaar ah laga keenin, ballamaha la qabtay tan iyo 1992-kii.
Iyadoo la raacayo talooyinka ay soo saartay Unugga Kormeerka Wadajirka ah ee Qaramada Midoobay (JIU) ee la xiriira xulashada iyo shuruudaha adeegga Madaxda Fulinta ee Hay'adaha Nidaamka Qaramada Midoobay (JIU/REP/2009/8), codsade kasta waxaa laga codsanayaa inuu ku soo lifaaqo shahaado caafimaad wanaagsan oo ay saxeexday goob caafimaad oo la aqoonsan yahay oo lagu soo bandhigayo musharaxnimadeeda sida ku cad farqada 6aad.
Sida uu dhigayo xeerka 27(2), ereyga "Xubnaha jooga iyo codaynta" waa in la fahmaa in loola jeedo "Xubnaha jooga oo u codeynaya ama diidaya". Sidaa darteed, aamusnaanta iyo codadka madhan waxa loo tixgalinayaa inaanay ahayn codayn.
Tallaabooyinka ay qaadi doonaan Golaha Fulinta
Golaha fulinta waa lagu martiqaaday:
In la go’aamiyo in xeer-hoosaadka Goluhu ansixiyey ee xulashada qofka loo magacaabayo jagada Xoghayaha Guud ee kal-fadhigoodii saddex iyo labaatanaad ee May 1984 (go’aankii 17(XXIII)), lagu kabo kuwii lagu ansixiyey kal-fadhigiisii ​​afar iyo soddonaad Noofambar 1988 (go'aanka 19(XXXIV)), iyo fadhigiisii ​​afartanaad ee Noofambar 1992 (go'aanka 19(XLIV)) waxa kale oo lagu ilaalin doonaa kalfadhigiisa 105aad;
Si loo xaqiijiyo in, fasiraadda xeerarka sharciga ah ee lagu maamulayo doorashada Xoghayaha Guud iyo go'aamada ku xusan farqada (a) sare, waa in tixraac loo sameeyaa waxa ku jira dukumeentigan;
In lagu martiqaado Dawladaha xubnaha ka ah inay soo jeediyaan murashaxiinta jagada Xoghayaha Guud ee muddada 2022-2025, iyadoo la hubinayo in magacaabistoodu ay gaarto Xarunta Dhexe ee Ururka (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain) laba bilood ka hor furitaanka kalfadhiga 116aad ee Ururka Golaha Fulinta, ie, 24:00 saacadood wakhtiga Madrid, 11ka Maarj 2022 (taariikhda la xaqiijinayo), ugu dambayn;
Si aad u codsato musharrixiinta inay soo gudbiyaan, oo ay weheliso xogta taariikh nololeedka iyo shaqada, bayaan siyaasad iyo ujeeddooyin maamul, oo muujinaya aragtidooda ku aaddan habka ay u gudan doonaan hawlaha Xoghayaha Guud; iyo
Si loo xaqiijiyo in kalfadhiga 116aad ee golaha fulinta lagu soo xuli doono qofka la soo magacaabayo waa in ay ka soo jeediyaan kalfadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Guud ee jagada Xoghayaha Guud ee Ururka ee muddada 2022-2025.